Yakanakisa Urolithin A poda (1143-70-0) - Mugadziri & fekitori
Cofttek ndiyo yakanakisa Urolithin A yekugadzira hupfu muChina. Fekitori yedu ine yakakwana yekugadzira manejimendi system (ISO9001 & ISO14001), iine pamwedzi yekugadzira inokwana 400kg.
Urolithin A upfu Magadzirirwo
Kemikari Zita: 3,8-Dihydroxybenzo [c] chromen-6-one
Chemical Fomula: C13H8O4
Color: Yakachena kusvika kune-yakachena pfu yakasimba
InChi Kiyi: RIUPDUFZCXCHM-UHFFFAOYSA-N
NHASI Code: O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=C(O1)C=C(O)C=C3
basa: Urolithin A, iyo gut-microbial metabolite ye ellagic acid, inobata anti-immune, antiproliferative, uye antioxidant zvinhu. Urolithin A induces autophagy uye apoptosis, inodzvinyirira cell kutenderera kufambira mberi, uye inhibits DNA synthesis.
Application: Urolithin A ndeye metabolite ye ellagitannin; Pharmaceutical Intermediates
Solubility: Soluble muDMSO (3 mg / mL).
Storage Temp: Kuoma, kusviba uye pa0 - 4 C kwenguva pfupi (mazuva kusvika kumavhiki) kana -20 C kwenguva refu (mwedzi kusvika makore).
(1) Inogona kuwedzera hupenyu
Urolithin A inokanganisa mitophagy nekusarudza kubvisa iyo yakadzika mitochondria. Izvi zvinovimbisazve kudzokorora mitochondria yekushanda kwakanyanya. Mitochondria inowanzo kukanganiswa nezera uye zvakare nekuda kwekunetseka. Kubvisa yakakanganisika mitochondria inoita basa mukuwedzera hupenyu.
Mukudzidza kwehonye, ​​urolithin Chiwedzerwa chakawanirwa pa50 µM kubva pachikamu chezai kusvika parufu chakawanikwa kuwedzera hupenyu hwavo ne45.4%.
Mune kumwe kuongorora kwakaitwa mu2019 uchishandisa senescent human fibroblasts, urolithin A yekuwedzera yakawanikwa kuratidza kugona kwekukwegura. Iyo yaikwanisa kuwedzera mhando 1 collagen expression uye zvakare kudzikisira kutaura kwematrix metalloproteinase 1.
Chidzidzo chidiki chevanhu chakaratidzawo kuti UAA yakakwanisa kuvandudza mashandiro emisumbu uye hutano hwemapfupa muvanhu vakura pavakapihwa nemuromo pa500-1000mg kwenguva yemavhiki mana.
(2) Batsira kudzivirira gomarara reprostate
Iyo urolithin uye yavo yekutanga, ellagitannins, vane anti-cancer cancer. Ivo vanokwanisa kudzivirira kenza-cell kuwedzera kuburikidza nekutenderera kwemaseru nekusunga apoptosis. Apoptosis zvinoreva kufa kwakagadzirirwa maseru umo muviri unobvisa cancer pamwe nemamwe maseru anotapukirwa.
Mukuongororwa kwemajoini akaiswa nemasero anorwara nevanhu, ellagitannins metabolites (Urolithin A) akawanikwa achikanganisa kukura kwekenza yeprostate. Chidzidzo chacho chakaenderera mberi chakataura nezvekukwirisa kwemetabolites muprostate gland, colon nematumbu.
(3) Kukurudzira kwekuziva
Urolithin A inokwanisa kuchengetedza mitsipa kubva kurufu uye zvakare inogona kukonzeresa neurogeneis kuburikidza nekurwisa-kurwisa kusaina.
Mukudzidza kwe mbeva nekukanganisika kwemukati, urolithin A yakawanikwa yekugadzirisa kusaziva uye kuchengetedza mitsipa kubva kuopoptosis. Izvi zvinoratidza kuti UA inogona kushandiswa pakurapa chirwere cheAlzheimer's (AD).
(4) Anti-kufutisa kugona
Tsvagiridzo inoratidza kuti ellagitannins inokwanisa kudzivirira kuunganidzira lipid uye zvakare adipogenic mamakisi akadai sekutanga kukura kupindura protein 2 pamwe nekukurudzira-inosunga mapuroteni kuburikidza nesero kutenderera.
Urolithin A yakawanikwa yakanangana nekuvandudza insulin kunzwa saka inodzivirira kukura kwekuneta.
Muchidzidzo chemakonzo ane huturu hwekufutisa, urolithin Kuwedzeredzwa kwakawanikwa kuti udzivise kudya-kwakakora kufutisa uye metabolic kukanganiswa mumakonzo. Chidzidzo chakaratidza kuti UA kurapwa kwakawedzera simba rekushandisa saka rakaderera mumuviri misa.